Fantaro ireo mpanoratra - Instant Malagasy
Ireo mpanoratra tononkalo eto amin'ny Instant Malagasy dia azo heverina fa tsy mba irony fakofakon-kirihitra teny ho eny fa ny voamboana tsongaina aman'ala. Mpanoratra, mpankafy ary indrindra mpizara ny antson-tsaina, ny bitsi-panahy amin'ny alalan'ny raki-tsoratra nasesiky ny ainga. Eto no ahafahanao mahafatatra misimisy kokoa ireo mpanoratra nandray anjara ao amin'ny takelaka Tontolonao mpanoratra
Par Parfait Partout le 16 Avril 2014 à 16:12
I RAHANITRANIRINA Volatiana Eliane mpanoratra eto amin'ny Instant Malgache. no ten Mi-A.V (MiAndryVola) no solon'anarany eo amin'ny kanto.
Maro ny tara-kevitra mahaliana sy mahasarika ny aingam-pahaniny fa ny tena maro amin'izy ireny dia ny fitiavana, ny ranomaso, ny alahelo
ny zavakanto tiany ankotra ny tononkalo dia ny mihaino tantara, mihira sy ny sisa ihany koa.
Manana tanjona ny tovovavy eo amin'ny sehatry ny kanto dia ny hamoaka boky.
Raha te-hitafa amin'i Mi-A.V ianao dia inty ny rohy facebook-ny: Mi-A.V
Mirary fahombiazana ho azy ny Instant Malgache
Par Parfait Partout le 7 Avril 2014 à 17:34
Ny Andriambavilanitra, sakaizan'ny soratra, ny teatra ary mpankafy sy mpanondro-bidy ny riba sy ny hai-kanto malagasy eto amin'ny Instant Malagasy
tsy iza izany fa i RANRIANANTOANINA Voahirana na koa fantatra amin'ny Solon'anarana hoe NIRAVO
Nanomboka nanoratra ny taona 2000ary niditra ho mpikambana tao amin'ny faribolana sandratra
Efa namoaka ny boky hoe "Afindrafindrao" niarahana tamin'i TIAVINA
Nandray anjara tamin'ny boky maro niarahana tamin' ny faribolana sandratra Manoratra tononkalo, tantara antsehatra , miantsaAnisan'ny nanangana ny TROPY RANDRANA,mpikambana ao amin'ny fmtm , izay manao teatraMpilalao tantara an'onjampeo: rdb, aceem, rnm..mpilalao teatra ihany koa.
Natolotra ny Instant Malagasy izao fampahafantaran-tena izao ny volana aprily 2014
Niaina Jacque Harï
Par Parfait Partout le 7 Avril 2014 à 17:27
I NAMBININTSOA Avotriniaina H.J mpiangaly ny asa soratra toy ny tononkalo ary manana aingam-pamorononana manaitra sy mambabo ny fo avy hatrany. Teraka tamin'ny 12 aprily 1992 tao andranomadio Antsirabe ny tovolahy.
Niaina Jacque Harï no hahalalan'ny maro azy amin'ny tontolon'ny seraserany sy ny fanoratana.
Hizara ny aingam-panahiny eto amin'ny Instant Malagasy ihany koa ny tenany ka isika rehetra mpankafy no andrandrainy hanome hasina ny sorany. Raha te hitafa amin'i Avotriniaina H.J ao amin'ny Facebook ianao dia inty ny rohy ahafahanao manao izany. Niaina Jacque Harï
Fanoloran-tena natolotra, narafitra ary napetraka teto amin'ny Instant Malagasy ny volana aprily 2014
Par Parfait Partout le 2 Avril 2014 à 07:54
Faly miarahaba antsika rehetra mitsidika ity tranonkalan’ny Instant Malagasy ity ny tenako, RANDRIANJAFY ANDRIANAVALONJAKA Rajomahery no anarako ary RaAnRaMa no solon’anarana entiko amin’ny fanoratana, anarako ihany no nafohezina satria io no napetraky ny mpampianatra ahy tany am-pianarana ary notazoniko. Tonga teto an-tany aho ny 29 septambra 1993 tany ambanivohitr’Ankazobe tany .
Kilasy faha-8 aho no nanomboka nanoratra, niato anefa izany noho ny antony maro, ny famakiana sy ny fankafizana ny tononkalon’i “Ny Hariaina” tanaty fesiboky ny taona 2011 indray no nahatonga ahy hiverina hanoratra , ka indro aho eto androany manoratra ho ahy, ho anareo, ho antsika, ho azy iny; dia misaotra sahady amin’ny fankafizana e.
Faly miarahaba an'i RaAnRaMa, raha te hitafa amin'izao tovolahy izao ianao dia ity adiresy facebook-ny Rajo Mahery
(taratasy fanoloran-tena natolotr'i Rajo Mahery teto amin'ny Instant Malagasy ny volana aprily 2014)
Par Parfait Partout le 20 Février 2014 à 15:45
Instant Malagasy - Création blog sur Eklablog - CGU - Signaler un abus -